5 Beddelka Google Play Store iyo sida loogu isticmaalo si badbaado leh | Androidsis
Muddooyinkii dambe waxaa jira hadal ah in Google ay lacag ka qaadi doonto in lagu daro Play Store iyo adeegyadeeda bareegyada Android ee lagu iibiyo dhulka yurub, waa war dhab ah oo la bixiyay ganaax culus oo ah in dalal badan oo ku saleysan Mountain View lagu qasbay inay bixiyaan. Tani waxay dhalisay Mustaqbalka aan fogeyn waxaa laga yaabaa inaan aragno fargeetooyinka Android oo lagu rakibo bakhaarro kale oo Google Play Store ah.
Taasi waa sababta iyo sababta oo ah waxaan rabay inaad ogaato suuqyada qaar ee codsiyada iyo ciyaaraha, in maanta aan kuu keeno kuwan 5 beddel Google Play Store inaad u isticmaali karto hadda wixii ka dambeeya qalabkaaga Android.
1 Taxaddarrada la tixgelinayo ka hor inta aan la rakibin codsiyada laga soo dejiyey dukaanladan kale
2 5 Beddelka Google Play Store
2.5 Nolol xumo
Taxaddarrada la tixgelinayo ka hor inta aan la rakibin codsiyada laga soo dejiyey dukaanladan kale
Aad ayey muhiim u tahay inaad ogtahay in bogaggan ama barnaamijyada loogu talagalay Android aan maanta kugula talin doono, dhammaantood waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin goobo ammaan ah oo aan khayaano lahaynWaxyaabaha kale ayaa ah feylasha qaab apk ah oo aan kala soo dagsan karno, taas oo ah, codsiyada iyo ciyaaraha aan kala soo degno dukaamadan beddelka ah ee Google Play Store.
Waxay ku jirtaa kiiskan markii aan yeelan doonno kun indhood, oo ka hor inta aanad rakibin wax walba, raac talaabooyinkan fudud ee aan kugula talinayo fiidiyowga ku lifaaqan ee aan uga tagay kaliya korka xariiqyadan.
Taxaddarrada qaarkood oo aan ku soo koobi karno kuwan aasaaska amniga marka la rakibayo apks:
- Ha siinin rukhsad si otomaatig ah loogu rakibo ama loo cusbooneysiiyo barnaamijyadan iyada oo loo marayo dukaamadan beddelka ah ee Google Play Store - Weligaa ha ku rakibin codsi ka soo degsada dukaanladan kale toos - Had iyo jeer ku samee skaanka Apk ka hor inta aan la rakibin iyada oo loo marayo shabakadda Virustotal.com
Anagoo tan oo dhan aad u cad oo maanka ku haya, waxaan hadda u sii gudbi karnaa talooyinka kuwan 5 beddel Google Play Store maxaa ku dhacay liistada hoose
Ugu horreyntii, waxaan idiin sheegayaa in nidaamka aan ku soo bandhigayo beddelka soo socda ee Google Play Store uusan xiriir la lahayn tayada mid kasta oo ka mid ah Suuqyadan kale ay noo soo bandhigayaan.
Tan waxaan uga jeedaa in ikhtiyaarka koowaad uu ufiican yahay kan ugu dambeeya ee beddelka Google Play Store oo aan hoos ku taxidoono, Kaliya waa inaad doorataa ikhtiyaarka ama xulashooyinka kugu habboon baahiyahaaga gaarka ah..
El Amazon Appstore Waa nooc ka mid ah waxyaabaha lagu beddeli karo Google Play Store, oo ah mid duug ah oo ay u yaqaanaan inta badan dhammaan dadka isticmaala Android iyo dukaan heerkiisu ku eg yahay oo lagu rakibay boosteejooyinka Kindle ee shirkadda weyn ee iibka ee internetka.
Codsi leh naqshad aad u Amazon ah taas oo marka lagu daro awood u lahaanshaha helitaanka buug-gacmeed aad u wanaagsan oo ah codsiyada iyo cayaaraha, labadaba lacag iyo lacag la'aan, waxaan sidoo kale awoodnaa kasban lacag qadaadiic ah si aad ugu iibsato qiima dhimista Amazon ama Appstore Amazon.
Soo dejiso Amazon Appstore adoo gujinaya halkan
Codsiga labaad ee aan kuugu soo bandhigo fiidiyowga ee aan kaaga tagay bilowga qoraalkan, waa arjiga F-Droid, Dukaan kale oo lagu kaydiyo Play Store kaas oo laga helo soo dejin toos ah ku dhowaad dhammaan codsiyada bilaashka ah ee aan kala soo bixi karno dukaanka rasmiga ah ee Google.
Beddel noo ogolaanaya ku soo dejiso arjiga qaab apk ah adigoon ku rakibin barnaamijkeenna Android, dhinac ka xiiso badan qofkasta oo jecel inuu wax ka beddelo barnaamijyada ama xitaa u soo ururiyo inuu ku rakibo waqtiga ay u arkaan inay ku habboon tahay.
By habka, F-Droid waa il furan ama mashruuc Furan Furan, oo leh codsi u gaar ah oo loogu talagalay Android oo aad awoodid ka soo degso isla isla xiriiriye.
Talada xigta ee aan sameyn doono waa Apptoide, codsi kale ama dukaan ku kaydsan Google Play Store, oo, illaa iyo inta uu ka hadlayo apk, uu yahay codsi gebi ahaanba ammaan u ah Androids-keena.
Dhibaatada ka jirta codsigan ama Suuqa kale ee loo yaqaan 'Play Store', ayaa ah inaan ka heli karno ku dhowaad wax kasta oo aan raadineyno, taas oo ah, Apptoide, marka lagu daro inaan awoodno inaan ka helno codsiyo bilaash ah sida Suuqyada kale ee aan soo sheegay, halkan haddii aan dooneyno inaan ka helno codsiyo wax laga beddelay iyo barnaamijyo lacag leh iyo ciyaaro aan awoodi doonno inaan ku soo dejisanno bilaash.
Taasi waa sababta baahida degdegga ah loo qabo Raac talooyinka amniga ee aan kor ku soo sheegay si aaladda Android aysan u wadin nooc kasta oo qatar ah maaddaama aanan dooneyn taas qalad jira awgeed waxaan ku qaadnay nooc kasta oo furin ah.
Waxaad kala soo bixi kartaa Apptoide xiriiriyehan.
APK Mirror waa mid ka mid ah dukaamada beddelka u ah Google Play Store oo aan maanta kugula talinayo ma laha codsi u gaar ah oo loogu talagalay Android, runtuna waxay tahay inaanan u baahnaan doonin wax badan tan iyo markii laga furayo shabakadda biraawsarkayaga aanu jecel nahay isla markaana la abuuro marin toos ah oo laga helo desktop-ka waxaan awoodi doonnaa inaan u adeegsanno sidii inay yihiin uun codsi kale.
Codsi ka si toos ah u soo dejiso ku dhowaad barnaamij kasta oo aan ka heli karno Play Store, xitaa taas oo aan ka heli doonno cusbooneysiintii ugu dambaysay, kuwa aan weli gaarin Dukaankeenna Play, ama codsiyada ku jira Beta ama xaaladda Alpha iyada oo aan la iska diiwaan gelin barnaamijyada tijaabada beta ee Google Play Store.
Haddii tan aan ku darno taas waan soo dejisan karnaa codsiyada rasmiga ah iyadoon wax laga qaban iyo in aan ka heli karno barnaamijyadan aan laga heli karin Play Store sababo la xiriira xaddidaadyada juqraafiyeed ama bilowga xayiraadda, waxaan dhihi karnaa shaki la'aan inaan wajaheyno mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan beddelka Google Play Store ee goobta Android.
Waad heli kartaa Bogga rasmiga ah ee APK Mirror adigoo gujinaya xiriiriyahan.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, waxaan kugula talineynaa inaad tahay dukaan kale oo ku habboon Google Play Store, bogga rasmiga ah ee Malavida.com, dukaan kale, midka kaliya ee talooyinkaan maanta, in Waxaa gebi ahaanba abuuray horumariyeyaal asal ahaan Isbaanish ah, gaar ahaan koox ka mid ah wiilasha Valencian oo runtii si adag u shaqeynaya.
Awoodda boggan ama beddelka Google Play Store, iyadoo laga saarayo qayb ka mid ah nashqadeyntiisa in si daacadnimo leh wax badan u wanaajin karto, waa in lagu xuso dhammaan waxyaabaha laba qodob oo adag halka ay ka jiraan; kan ugu horreeya waa xawaaraha Webka laftiisa xagga socodka hadalka iyo dhanka xawaaraha faylalka apks-ka ee aan soo dejino.
Marka labaad oo ah qodob muhiim ah oo aan ka yareyn, waxaa mudan in la muujiyo dadaalka ay dadkani sameynayaan si ay u helaan codsiyada ay ka soo ururiyaan Suuqooda sida ugu macquulsan uguna macquulsan. Dadaal aad u weyn oo ku jira taas oo mudnaan siinta cusboonaysiinta sida ugu habboon, sare, iwm, iwm.
Marka la soo koobo, degel aad u fududahay in la isticmaalo oo aan kala soo dagsan karno codsiyada qaab APK ah si aanan ugu baahnayn inaan ku tiirsanaano Google Play Store. Haddii aad tirtirtay dukaanka barnaamijka oo aad rabto soo kabsado Play StoreXiriiriyaha aan hadda kaaga tagnay, waxaad ka heli doontaa sida loo sameeyo.
Ilaa halkan waad joogtaa 5 beddel Google Play Store, Qaar ka mid ah Suuqyada beddelka ah ee fiidiyowga ah ee aan uga tagay bilowga maqaalkan waxaan ku tusayaa si faahfaahsan oo weyn sidoo kale waxaan ku siinayaa talooyinka ku habboon ee isticmaalka aaminka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 5 Beddelka Google Play Store